Kibera: Mampahafantatra Bebe Kokoa An’ireo Vondrom-piarahamonina Voahilikilika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 2:20 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany iray avy amin'ny fiarahamiasa tamin'ny Global Voices sy ny Map Kibera ary ny Map Mathare nandritra ny Fihaonamben'ny Global Voices tany Naïrobi tamin'ny jolay 2012
Lahatsoratr'i Leila Nachawati Rego
Nandritra ny Fihaonamben'ny Global Voices tany Naïrobi tamin'ny taona 2012, vondrona iray tamin'ireo mpikambana mpikarakara no tonga tany Kibera, tanàna tena faran'izay tsizarizary ao Kenyà sady iray amin'ireo tena be mponina indrindra eran'izao tontolo izao. Nandritra ny fitsidihana nataonay, nifanehatra tamin'ireo tomponandraikitra sy ireo mpaintsehatry ny Map Kibera Trust [amin'ny fiteny anglisy sahala amin'ireo rohy rehetra ato amin'ny lahatsoratra] tao an-toerana izahay, izay miezaka manentana ny tontolo ivelany momba ny filàn'ny mponina ao Kibera, amin'ny alalan'ny fampiasana ny lahatsary sy ireo media sosialy.
Sary an'ny Map Kibera
Raha toa vinaniana ho ny voalohan'ny taona 2013 ireo fifidianana tao Kenyà, misy matahotra ny hisian'ny herisetra vaovao iray izay hamarina ny firenena ho anaty hady, fitaratr'izay nitranga taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 27 décembre 2007. Tamin'izany fotoana izany, ny fanambaràna ny fandresen'i Mwai Kibaki dia niteraka krizy sady ara-politika no ara-toekarena sy amin'ny maha-olombelona. Nilaza fisianà hosoka tamin'ny fifidianana ireo mpanara-maso iraisam-pirenena ; vaky ireo herisetra nikendrena manokana ny vondrom-piarahamonina Kikuyu, izay niavian'i Kibaki, narahan'ireo hetsika valifaty manohitra an'ireo vondrona mpanaraka an'i Odinga, kandidà an'ny antoko mpanohitra.
Niezaka i Hamza Ahmeda sy Tobias Omondi, tomponandraikitra teo an-toerana, hanakana ireo fifanandrinana foko izay notohanan'ireo antoko politika nikendry ny hahazo vato. Araka ny voalazan'i Hamza Ahmeda, ny fikambanana Interfaith Women of Peace, “mifankahazo tsara ireo olona ara-politika avy amin'ireo antoko isankarazany, hita miara-misotro dite foana izy ireo. Koa maninona àry no mifamono?” Tsipihany ihany koa ny tokony hiasana hisian'ny zotran'ny fampihavanana:
“Tsy mahavita mamela heloka na mihavana ny olona raha toa tsy mifampiresaka, na miaiky izay nataony sady manetry tena mifanakalo hevitra, tena mankarary izany nefa ilaina. Tsy misy dikany ny mangata-pamelàna amin'Andriamanitra raha toa ianao tsy mbola nandefa ny fangatahanao tamin'ireo niharan'ny nataonao. Tsy hamela heloka anareo Andriamanitra raha tsy efa nifamela heloka ianareo.”
Mpikambana amin'ny antoko liberaly Orange Democratic Movement i Tobias Omondi. Miasa ho amin'ny fampidirana ara-tsosialy an'ireo olona manan-kilema izy, amin'ny alalan'ny fanandramana miady amin'ny trangam-panikilihana izay mahazo an'ireo Keniana miisa 4 tapitrisa mahery. Voasoratra ao anaty Lalàmpanorenanan'ny firenena fa ny 5% n'ireo asa an'ny governemanta ny tsy maintsy atokana ho an'ireo mpiasa manana fahasembanana, saingy ny ankamaroan'ireo olompirenena no tsy mahafantatra izany. “Tsy mirotsaka ho amin'izany izy ireo. Indraindray tsy ananan'izy ireo koa ny fari-pahaizana ilaina ho amina asa iray atolotra ka miezaka koa izahay mihetsika manoloana an'io sehatra io.”
Samy miezaka izy roa ireo ny mba hanao izay hahatsapan'ireo olona ny maha-zava-dehibe ny fahaizana misafidy sy mba hahazo antoka tsara fa ny antoko izay tiany ho voafidy dia tena hisolo tena azy ireo tokoa ary hanao izay rehetra azony atao mba hanatanteraka ny filàn'izy ireo. “Tsy misahirana mandeha hatrany Kibera akory ireo solontenan'ny antoko tena goavana raha tsy efa mila ny vatonay,” hoy ny fanamarihan'i Ahmeda. “Mila mifidy mpitondra hihaino anay izahay, hiara-hiasa aminay. Hitanareo ve ny toe-piainana iainanay? Mandrapahoviana no mbola haharetan'izany?”
Ireo trano ao Kibera. Eny ambonin'ny tafontranon'ireo sasany, afaka ahitana ny ambin'ireo petadrindrina tamin'ny taona 2009, ao anatin'ny sehatry ny tetikasa Women are Heroes, avy amin'ny mpanakanto frantsay JR. Sary an'i Laura Schneider (GV Flickr)
Ho fanampiana ny mponina mba hahatsapa ny maha-manan-danja an'ireo olana ireo, ary ireo hafa mikasika azy ihany koa, no tanjona nananganan'ny andiana tanora mponina ao Kibera ny Map Kibera Trust tamin'ny Aprily 2010, niaraka tamin'ireo fanampiana ara-bola vitsivitsy avy tamin'ny Unicef sy ny Hivos. Tsy nanana fahaizana ara-teknika izy ireo tamin'ny voalohany, izy ireo ihany no nampiana-tena tamin'ny fikirakiràna an'ireo fakantsary nomerika madinika mba hanombohana manambatra an'ireo vaovao tena marina any amin'ireo tanàna tsizarizary ao Kibera sy Mathare, sady mandrafitra azy ireo ho anaty sarintany avy amin'ny alalan'ny rindrambaiko anaty tambajotra sy azo idirana maimaimpoana an'ny Ushahidi. Alahatr'izy ireo araka izany ireo angona hahafahana mahita ny misy an'ireo rano, ireo toerana fidiovana iraisan'ny rehetra, ireo tobim-pitsaboana, ireo sekoly tsy ofisialy, ireo fiangonana sy ireo maoske, ireo ‘vidéoclubs’, ireo fikambanana vondrom-piarahamonina isankarazany, sy ny sisa… “Manao izay azonay atao izahay mba hampahafantarana an'ireo mponina voahilikilika, hoy ny fanazavàn'i Kefan Guito. Raha tsy eo amin'ny sarintany ianao, dia tsy misy. Teo aloha, toerana foana i Kibera teo amin'ny sarintany: iza no te hampiasa vola amina toerana iray izay tsy misy na inona na inona?”
Iray amin'ireo tetikasa nentin'ny Map Kibera Trust ny Voice of Kibera. Vohikala aterineto izy io azon'ny vondrom-piarahamonina hidirana mba hizarana an'ireo vaovao amin'ny tambajotra, ahitana an'ireo haintrano, ireo loza ary ireo tranga maika hafa. Ny findain'ireo mpampiasa no ampiasainy mba hampitàna ny vaovaon'izy ireo ao amin'ny vovonana. Mora ihany ny vidin'ireo SMS ao Kenyà ary izay no antony mahatonga, araka ireo mpandrindra ny tetikasa, mampahomby io fomba io mba hampitàna sy hanaovana hetsika momba ireo zavatra manan-danja ilain'ny vondrom-piarahamonina.
Tetikasa hafa an'ny Map Kibera Trust ny Kibera News Network izay mikatsaka ny hanatontosa tafatafa iarahana aminn'ny mpandray anjara fototra ao anatin'ny vondrom-piarahamonina sy mba hametraka indray ireo tantara ao anatin'ny vanim-potoanany mba hanomezana lanja bebe kokoa sy dikany an'ireo angondrakitra voatahiry. Mandresy lahatra mikasika an'ireo antony isankarazany ireo tomponandraikitra ao aminy no sady mitady izay hamohazana ny fisainana amin'ny alàlan'ny fandefasana ho an'ny daholobe ireo lahatsariny. Ny tantara mitondra ny lohateny hoe “Ny olana mikasika ny rano ao Kibera” no iray tamin'ireo nahomby indrindra, izay nampiseho ny tsy fahampian-drano nosedrain'ireo faritra marobe tao amin'ilay tanàna tsizarizary. Marobe ireo mponina ao Kibera no tsy mahazo rano ary ataon'ireo mpivaro-drano lafobe ny vidiny. Tohin'ny fandefasana ilay sarimihetsika, nikarakara sehatra fifanakalozan-kevitra mikasika ilay olana ny filankevitra monisipaly tao Naïrobi ary nahita vahaolana tao anatin'izany. Hatramin'io fotoana io, namidy mora ny rano.
Tao anatin'ireo fandefasana sarimihetsika hafa, nisy an'ilay iray nifandray tamin'i Kimbilio forum, izay natao mba hanentanana ireo mponina momba ireo olana mifamatotra amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy, na ilay nampiseho ny asa fanadiovana iombonana nokarakaraina mba hampifanakaikezana an'ireo olona sy hampiroboroboana ny fandriampahalemana.
Raha nanontaniana mikasika izay fitaovana ananany ny Kibera News Network, nandrafitra lisitra haingana avy tamin'ireo fakantsary nomerika enina sy solosaina enina i Stephene Oduor et Joshua Ogure. “Mieritreritra ny hanorina fiaraha-miasa miaraka amin'ireo media klasika izahay. Mila fanampiana izahay mba hahafahana manohy ny asanay”, hoy Stephene Oduor. “Ny olana, maro ireo mponina ao Kibera no tsy manana fidirana amin'ny Aterineto, hoy i Joshua Ogure manampy. Ny ampahany betsaka amin'ny asanay dia mihodina ao anatin'ireo toerana izay tsy maintsy hofainay mba handefasana an'ireo sarimihetsikay. Ireo fandefasana sarimihetsika ireo no fomba iray entinay manentana, mifanakalo hevitra, manangona ireo vaovao amin'ireo tantara hafa ho rakofana sy amin'izay tena manan-danja amin'ny mason'ny vondrom-piarahamonina.”